Public Kura | » ‘म सेवक हुँ, भोट दिनुस्, सेवा गर्छु’ ‘म सेवक हुँ, भोट दिनुस्, सेवा गर्छु’ – Public Kura
‘म सेवक हुँ, भोट दिनुस्, सेवा गर्छु’
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा विद्याप्रसाद यादव चर्चित र लोकप्रिय नाम हो । युवामाझ लोकप्रिय यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का युवा नेता हुन् । बिगतमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार भएका यादवले सम्माजनक मत ल्याएका थिए । यसपटक पार्टीले उनलाई रोहिणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएको छ । उम्मेदवार यादवसँग पब्लिक कुरा निर्वाचन बिशेषका लागि गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ ।
अध्यक्ष पदमा तपाइँको उम्मेदवारी किन् ?
पहिलो त रोहिणी गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ । मेरो उम्मेदवारी यही भ्रष्टाचार अन्तका लागि हो । साथै गरिबी, पछौटेपन अन्त्य हो । शिक्षा बिकासका लागि हो । यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायतका क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । विगतका जनप्रतिनिधिले यी क्षेत्रमा केही काम गर्न सकेनन् । कमिसनमा मात्रै डुवे । पालिकाको आफ्नो भवनसमेत बनाउन समेनन् । भाडाको घरमा लाखौं रुपैयाँ खर्चिए । । यी तमात समस्या समाधान गर्ने मेरो चाहना छ । यसैले म उम्मेदवार भएको छु । यदि म निर्वाचित भए भने यहाँका युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराई बैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्ने लगायतका काम गर्ने मेरो उद्देश्य छ । रोहिणी गाउँपालिकामा जनताले पहिला शासकलाई रोजे, अहिले जनता सेवक खोजेका छन् ।
तपाइँको एजेन्डा के–के छन् ?
मेरो मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने नै हो । यस्तै, विकास निर्माण संगसंगै, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, रोजगार बृद्धि लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने हो । किसानलाई सहजरुपमा मलबीउ उपलब्ध गराउने र व्यवसायिक कृषक उत्पादन गर्ने नै छ । अहिलेसम्म गाउँपालिकाको आफ्नो भवन निर्माण हुन सकेको छैन् । ब्याप्त भ्रष्टाचार निर्मुुल गर्नु, मस्जित मदरसा, मठमन्दिरको संरक्षण र विकास, औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नु लगायत मेरा मुख्य एजेण्डा हुन् । हाम्रो एजेन्डाले मूर्तरुप पाउनका लागि हामीलाई निर्वाचित गराई पठाउन जरुरी छ । हाम्रो जितले नै रोहिणी गाउँपालिकाको मुहार फेरिने छ । हाम्रो एजेन्डालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्न मतदातालाई आग्रह गर्दछु ।
मेरो र म संगै उठ्नु भएका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुको जितको आधार भनेको हामीले लिएको एजेन्डाहरु हुन् । हाम्रो एजेन्डाप्रति जनताको ब्यापक समर्थन छ । अहिले मसंगै हाम्रा उम्मेदवारहरुको चर्चा बृद्धबृद्धा, युवायुवती मात्र नभई बालबालिकाले पनि घरघरमा गर्छन् । यहाँ हाम्रो पार्टीको लहर छ । म बिगत १५ वर्षदेखि जनताको सेवा गरिरहेको छु । जनतालाई हामीप्रति बिश्वास छ । जताततै हाम्रो पार्टीको चुनावचिन्ह छाताको समर्थन आएको छ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाता हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ र निर्वाचनको दिनसम्म अझै मतदाताहरु हाम्रो समर्थनमा आउनुहुन्छ । हाम्रो मतदाता र एजेन्डा जितको प्रमुख आधार हो । अर्कातर्फ यहाँ हाम्रो पार्टीको संगठन बलियो छ । यसले पनि हामीले निकै सहज भएको छ ।
कस्तो गाउँपालिका बनोस् भन्ने चाहनुहन्छ ?
उत्कृष्ट गाउँपालिका बनोस् भन्ने चाहन्छु । नगरउन्मुख छ हाम्रो गाउँपालिका । नगर अनुसार बिकासको पाइला अघि बढोस् भन्न चाहन्छु । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिचाई, सरसफाई, बाताबरण, स्वच्छ पिउने पानी, ढलनालाको उचित व्यवस्था, बिद्युतिकरण, सानो अस्पताल, रिंग रोड, ग्रामीण पर्यटनमा अव्बल भएको गाउँपालिका भएको हेर्न चाहन्छु । यो सपनालाई मैले निर्वाचित भएर पुरा गरेर नै छाड्छु ।
मतदाताहरुलाई म यो विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छुु की रोहिणी मात्र होइन जुनसुकै स्थानीय तहमा तपाइँ शासकलाई होइन् काम गर्ने जनताको सेवकलाई रोजेर पठाउनु होस् । नेता भनेको जनताको काम गर्ने चौकीदार हो, नकि शासक । त्यसैले तपाइँको हरेक कुराको सुरक्षा गर्ने चौकीदारलाई रोज्नुहोस् । बिगतमा जितेकाहरुले जनताको पक्षमा काम नगर्दा जनताले दुःख पाए धेरै । त्यसैले मतदाताहरुसंग मेरो आग्रह छ की हाम्रो पार्टीका म लगायत सबै उम्मेदवारहरुलाई छाता चिन्हमा मत दिई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु ।